HomeTURKEYCoast Mediterranean33 MersinMESİAD: 'Nidaamka Tareenka Fudud waa in la dhisaa Meel laga dhisi doono mitirka Mersin'
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 33 Mersin, Coast Mediterranean, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY 0
tareenka mesiad mersine halkii laga isticmaali lahaa nidaamka tareenka fudud
Madaxweynaha MESİAD Hasan Engin wuxuu carrabka ku adkeeyay in Mersin uusan haysan waqti uu ku lumiyo si uu u xalliyo dhibaatada gaadiidku, taas oo ah dhibaatooyinka ugu weyn ee magaaladeenna ka jira, Hasan Engin wuxuu qoraalkiisa ku sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo nidaamka tareenka fudud halkii laga isticmaali lahaa metrooga qorshaysan ee Mersin. Wareejinta Metro waxay noqon doontaa mid qaali ah Madaxweyne Engin, iyo marxaladda mushkiladda gaadiidka Mersin oo leh heer tareen fudud, waa in lagu xaliyaa waqti gaaban iyo qiimo jaban, ”ayuu yidhi.
Warshadaha Mersin Warshadaha iyo Ururka Dadka Ganacsiga (MESIAD) Guddoomiyaha Ururka Hasan Engin ayaa sheegay in dhibaatada gaadiidka ee magaalo weyn sida Mersin ay tahay in si dhaqso leh loogu xalliyo, haddii kale Mersin wuxuu noqon lahaa kan khasaaraha. Madaxweyne Engin, dhibaatada gaadiidka; wasakhowga hawada, dhaqaalaha magaalada iyo dalxiiska ayaa dhabar jab weyn ku ah mushkilada gaadiid ee noqotay burcad garsoorayaasha Mersin ee lala wadaago soo jeedinta dadweynaha. Madaxweyne Engin wuxuu kula dardaarmay maamulada maxalliga ah iyo dhamaan xarumaha kale inay talaabo deg deg ah qaadaan.
“METRO MERSIN AAMIIN KU SAABSAN DHAQAALADA”
Madaxweynaha MESIAD Hasan Engin, oo bayaan u soo saaray Mersin Metro, ayaa ku dhawaaqay in shaqada ay ka bilaaban doonto 2020 ee Mersin, wuxuu sheegay in mashruuca metrogu uusan ku habooneynin sawirka Mersin isla markaana dhaqaalaha magaalada iyo miisaaniyadda Dowladda Hoose ay noqon doonto mid ciriiri ah.
Madaxweyne Engin; Yerine Thanks to nidaamka tareenka fudud ee lagu dhammeyn karo dhaqso iyo qiimo jaban magaalada dalxiiska ee Mersin, rakaabku waxay ku safri doonaan buuraha iyo aragtida badda. Dhibaatada gaadiidka waa in lagu xaliyaa nidaamka tareenka fudud marxaladaha, waqti gaaban, qiime jaban. Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin waxay ku dhamaysan kartaa mashruucan agabkeeda iyada oo aan loo baahnayn maalgelin dibadeed. Mashruuca metelo ma ahan mid deg deg ah ”.
MADAXWEYNAHA ENGİN wuxuu siiyaa tusaalooyinka ballanqaadyada is-beddelka
Duqa magaaladaasi, Hasan Engin ayaa sheegay in xulashooyinka khaldan ay lumin karaan Mersin marka la isbarbar dhigo nidaamka tareenka fudud ee dhulka hoostiisa mara iyo magaalooyinka dariska la ah Adana wuxuuna intaas raaciyay, “Dowlada hoose ee Mersin iyo dawladaha hoose ee kaleba waxay u baahan yihiin inay soo saaraan xalal degdeg ah oo deg deg ah. Go'aano xag-jir ah waa in loo qaataa si looga faa'iideysto Mersin, haddii aad samaysatid tareenka dhulka hoostiisa ma jiro cid wax ka qaban karta. Tusaale ahaan, Adana; dariiqa qaldan awgood iyo xulashooyinka ma aysan arkin xiisaha la doonayo. Adana muddo sanado ah ayey xanuun ku jirtay. Markaan tusaale u soo qaadano gobollada ku xeeran; dadku waxay doorbidaan tareenka fudud ee gaadiidka iyo waliba muuqaalka dhulka. Maaha shaqo in lagu safro kiloomitir magaalada badda adigoon safrin oo dhulka hoostiisa maraya oo daawanaya badda iyo buuraha. ”
“DHAMMAAN XUKUNKA GARSOORKA WAA KA SAMEEYAA Dhibaatooyinka aan la xallin”
Isaga oo ka hadlaya isweydaarsiga Harbor-Hal, Madaxweyne Engin wuxuu sheegay in Hal Junction, oo si habsami leh u shaqeynayay, uusan u shaqeynin si ku filan sababta oo ah gaadiidka ka bixida dekeda wuxuuna adeegsaday hadalada soo socda: “Maareynta Mersin Port; marinnada ka bixitaanka bixitaanku waa inay ahaadaan kuwo si deg deg ah loo geysto aaggeeda u gaarka ah. Meelaha lagu lugeeyo ee aan dhaafin lugeeyayaasha iyo darbiyada dekeda waa la beddeli karaa si loo bixiyo xoogaa waddo ah. Gawaarida wadada loo maro dekada ayaa si joogta ah loo carqaladeeyay. Isgoyska Kalshaa way dhamaatay laakiin dhibaatada taraafikada lama xallin. Mar labaad, isla jahwareerka ayaa sii socda. Haddii Mersin Port aysan hirgalin qaacidadan, xal looma helayo taraafikada halkaa ka jirta. Isgoyska gobolka waxqabadka uma shaqeeyo sidii isgoysyada sababtoo ah isgoysyada weelka. ”
GAADIIDKA Ka soo jeeda Aagagga loo yaqaan 'SETTLEMENT AREAS TO TO INUU CARRUURTU WAA IN AY BADAN YIHIIN'
Isagoo carrabka ku adkeeyay in gaadiidka ka yimaada meelaha la dego ee tagaya meelaha shaqada iyo warshadaha ay tahay in loo fududeeyo, Madaxweyne Engin wuxuu yiri, “Waxa ugu weyn ee la dhihi karo waa in warshadaha waxsoosaarka, gaar ahaan dhinaca bariga, ay ku yaraato xaddiga daqiiqadaha 45 ee carqaladeynta kadinka bariga inta ay magaalada ka soo galayaan OIZ. Ma jiro wado kale oo ka baxsan wadadaas, marka waxaan dhahnaa; 2. Codsiga xaraashka ee 18 waa in sida ugu dhakhsaha badan looga furi doonaa Wadada Warshadaha ilaa Aagga Wershadaha Tarsus. Marka la dhammaystiro jidkan, waxaa jiri doona albaab kale oo loo maro Deliçay oo ah meesha keliya ee laga galo Mersin oo ka socota dhinaca bari. Xoogga halkan ayaa yaraanaya. Isla mar ahaantaana, waxaa aad muhiim u ah in la qorsheeyo nidaamka tareenka iftiinka ee aagagga warshadaha ee waddadan oo la kordhin doono, marka la eego taraafikada magaalada ”.
Qorsheynta madaarka waa in la sameeyaa halkii uu ka dhici lahaa tareenka Gaziantep 29 / 01 / 2014 Qorshaha Gaadiidka ee Gaziantep waa in la sameeyaa halkii mootooyinka: Rugta Ganacsiga ee Gaziantep waxay dareenka ka qabtaa dhibaatooyinka magaalada ka hor doorashooyinka maxaliga ah. Madaxwaynaha Chamber of Architects Sitki Severoglu, gaar ahaan qorshaha gaadiidka iyo qorshaha degaanka ee magaalada, oo ay ku jiraan dhibaatooyinka ay diyaariyaan iyo soo jeedinta xalinta, waxay u soo bandhigi doonaan murashaxiinta badhasaabka. Dhinaca kale, 'Declaration Elections' oo ay la socdaan warbixinta diyaarisay magaca guddoomiyeyaasha degaanka si ay u noqdaan madaxweynaha dhibaatooyinka magaalada iyo xalalka la soo jeediyay ee dhibaatada, ayuu raaciyay. Sıtkı Severogow, oo shir saxaafadeed ku qabtay Rugta Dhismayaasha, ayaa ku dhawaaqay hadal ay diyaariyeen doorashooyinka ka hor. Isagoo xusay in gawaaridu ay tahay dhibaatada ugu weyn ee magaalada, ayuu yiri Severogan oo sheegay in beesha caanka ah ee degaanka
Nidaamka tareenka fudud waa in lagu dhisaa Manisa 12 / 07 / 2012 Ka jawaabista su'aasha ah in suxufiyadu ay wax ku biirin karaan OSB oo ku yaala wadada marinka wadada, Tooj ayaa sheegay, in dabcan ay tahay mashruuc aad u fiican. Mowduucyada sida xarumaha raaxada iyo xarumaha dhaqanka waa mawduuc ay tahay in ay ku jiraan ajandaha Maareynta. Waan ixtiraameynaa. Isla mar ahaantaana, waxay ku jiraan ajendahooda waxaanan qayb ka nahay gaadiidka dadweynaha oo si dhow ula xiriira. Waxaan rajeynayaa in aan horumar ka sameyn karno Cengiz Bey; Waxaan awood u yeelan doonaa in aan horey u hirgelinno nidaam tareen oo fudud si loo baabi'iyo gaadiidka basaska ee u dhexeeya Manisa iyo Aagga Soomaliya, waxaan ka hadli doonaa iyaga. Nidaamka tareenka fudud wuxuu ka imanayaa jidka tareenka fudud iyo kaniisada Manisa ee dhabta ah
Mashruuca Tareenka fudud ee Degmada Sakarya Mashruuca Xarunta Bazaar - Yenikent Inta u dhaxaysa 2. Khadadka Nidaamka Iskudhafka Nidaamka 25 / 07 / 2012 Degmada Sakarya, Xarun Xarun Xarun - Yenikent 2. Horumarin cusub oo la xidhiidha Nidaamka Mashruuca Tiknoolajiyada Khadadka ah ee Nidaamka Tareenka ayaa la duubay Sida laga soo xigtay xogta ay heshay Magazine Investments; Daraasadaha suurtagalka ah ee suurtagalka ah iyo daraasadaha horeyba loo ogaan lahaa suurto galnimada waa socotaa. Saraakiisha aan waraysannay mawduucaan waxay ku qeexeen in shaqadu qaadan doonto maalmaha 480 iyo ka dib marka la dhammeeyo hawsha, mashruuca waxaa lagu geyn doonaa barnaamijka maal-galinta 2013 oo lagu dhawaaqayo hindise-bixinta. Wixii faahfaahin dheeraad ah fadlan riix: Maalgashiga Maalgashiga: Maalgelinta
Mashruuca Tareenka fudud ee Degmada Sakarya Mashruuca Xarunta Bazaar - Yenikent Inta u dhaxaysa 2. Khadadka Nidaamka Iskudhafka Nidaamka 30 / 07 / 2012 Degmada Sakarya, Xarun Xarun Xarun - Yenikent 2. Horumarin cusub oo la xidhiidha Nidaamka Mashruuca Tiknoolajiyada Khadadka ah ee Nidaamka Tareenka ayaa la duubay Sida laga soo xigtay xogta ay heshay Magazine Investments; Daraasadaha suurtagalka ah ee suurtagalka ah iyo daraasadaha horeyba loo ogaan lahaa suurto galnimada waa socotaa. Sida saraakiil aan la waraystay on mawduuca daraasaddan iyo mashruuca maalin 480 doonaa waxay diiwaan dhaylo ah lagu salayn lahaa barnaamijka maal-sano 2013 marka la dhameystiro daraasadda. Sida la og yahay, in qurbaannada maalin January 04 2012 ururiyey "Mudnaanta Gaadiidka Dadweynaha Gaadiidka Master Plan iyo Diyaarinta Study hordhaca-galnimada la hordhaca Design of Service Consulting Systems" ayaa ku guuleystay gundhigga for shirkad injineernimada Mescioğlu ...
Mashruuca Nidaamka Isgaadhsiinta Saxaafadda ee Sakarya Center oo u dhexeeya Xarunta Xarunta iyo Yenikent 2. mashaariic horudhac ah iyo daraasad horay loo sameeyey oo ah khadka tareenka fudud 28 / 03 / 2013 Isku Duwaha Degmada Sakarya, Xarunta Dhaqanka - Yenikent 2. Horumar cusub ayaa la duubay oo la xidhiidha mashruuca Nidaamka Isgaadhsiinta ee Sakarya. Sida laga soo xigtay warbixin ka helnay maalgelin Magazine, Mashruuca horudhaca ah iyo daraasadaha suurtagalka ah ee suurtagalka ah ayaa la fuliyaa. Mas'uuliyiinta, ka dib dhammaystirka shaqooyinka qeybtii labaad ee hindisaha dhismaha 2013 ayaa soo bixi kara. Sida la og yahay, wadada maareynta khadka, oo ku saabsan 20 dheer oo dheer, waa la dhameeyay. Shirkadda oo loo dhiibo dawladda hoose. Nidaamka lagu dhisi doono jidka ayaa la go'aamin doonaa iyada oo loo eegayo Qorshaha Miisaaniyadda Gaadiidka ee Sakarya. Wixii faahfaahin dheeraad ah fadlan riix: Maalgashiga Maalgashiga: Maalgelinta
Qorsheynta madaarka waa in la sameeyaa halkii uu ka dhici lahaa tareenka Gaziantep
Mashruuca Tareenka fudud ee Degmada Sakarya Mashruuca Xarunta Bazaar - Yenikent Inta u dhaxaysa 2. Khadadka Nidaamka Iskudhafka Nidaamka
Mashruuca Nidaamka Isgaadhsiinta Saxaafadda ee Sakarya Center oo u dhexeeya Xarunta Xarunta iyo Yenikent 2. mashaariic horudhac ah iyo daraasad horay loo sameeyey oo ah khadka tareenka fudud
Xarunta Mashruuca Nidaamka Isgaadhsiinta fudud ee Sakarya - Yenikent 2. Mashruuca horudhaca ah iyo daraasadaha suurtagalka ah ee suurtagalka ah ayaa la fuliyaa
Metrobus waxay u imanaysaa Shanliyoolfa halkii ay ka heli lahayd Nidaamka Tareenka
Boztepeye gaariga iyo nidaamka tareenka waa in la sameeyaa
Inta u dhaxaysa Malatya iyo Elazığ